Qurxinta safayr ee Apple Watch waa mid adkaysi leh | Wararka IPhone
Warbixinnada Macaamiisha, oo ah kan dhinac ka raacay Antenagate-ka caanka ah, ayaa tijaabinaya shaashadda muraayadda safayr ee Apple Watch natiijaduna si la yaab leh ayey u wanaagsan tahay. Imtixaanada ka dib waxay soo gabagabeeyaan in muraayadda Apple Watch Sport la xoqay, haa, laakiin waa ka dib marka ay dhaafto 7 Mohs (hardness scale), taas oo aan u badnayn inay weligeed dhacdo.
Dhinaca kale, Apple Watch nooc kasta oo ka mid ah noocyadiisa oo ay ku jiraan muraayad safayr ah (birta mid ah iyo tifaftirka) ma xoqdo xaalad kasta ha noqotee (marka laga reebo Dheeman, oo loo arko inay ka adag tahay) Sikastaba xaalku ha ahaadee, ujeeddooyinka wax ku oolka ah oo dhan, uma badna inaad waligaa ku xoqdo Apple Watch-kaaga dhalo safayr ah..
Muraayadda safayrku waxay u soo baxday sidii ay u xoog badnayd sidii la filayay, taas oo in badan ku soo baxda. Safayrku wuxuu ka jawaabi lahaa weerarka 9 ee miisaanka adag, nooca Sport, oo kor u qaada muraayad wax laga beddelay, wuxuu iska caabin lahaa illaa iyo weerarka 7 ee miisaanka adag. Sidaa darteed, muraayadda safayr ee noocyada Apple Watch shaki la’aan way ka xoog badan tahay muraayadda la xoojiyay ee Apple Watch Sport., laakiin tan labaad ayaa ah tii keentay waxqabad la yaab leh, oo aan rajeyneyno inay ka muuqan doonaan iPhone-yada mustaqbalka. Xaqiiqdii, Apple Watch Sport waxay kor u qaadeysaa muraayad aad u xoog badan oo ay ku qiimeyn doonto kaalinta sideedaad ee Mohs, oo ka hooseysa safayr, oo u dhiganta topaz.
Sidoo kale, Warbixinnada Macaamiisha ayaa sidoo kale tijaabooyin qaar ku soo qaaday dareemayaasha Apple Watch, oo muujinaya illaa iyo hadda run ahaantii lagu kalsoonaan karo cabirrada Waxay sidoo kale ku quusiyeen Apple Watch biyo soddon daqiiqo qoto dheer oo ku saabsan 3 fuudh, iyagoo xaqiijinaya in qiimeynteeda iska caabintu u dhigantaa xaqiiqda qalabka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Qurxinta safayr ee Apple Watch ayaa iska caabiya